यस कारण म राजनीतिमा आए : रविन्द्र मिश्र - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
यस कारण म राजनीतिमा आए : रविन्द्र मिश्र
बिबिसी नेपाली सेवाका प्रमुख रवीन्द्र मिश्रले राजनीतिमा होमिनका लागि भन्दै बिबिसीबाट राजीनामा दिएका छन्। मिश्र नयाँ राजनीतिक अभियानमा होमिएका छन् । छिटै कल्याणकारी लोकतन्त्र र कल्याणकारी उदारवादी अर्थतन्त्रलाई आत्मसात गर्ने नयाँ पार्टी सहित उनी राजनीतिक खेलाडीका रुपमा मैदानमा उत्रिदैछन् । उनको पार्टीको नाम साझा पार्टी राख्ने चर्चापनि चलिरहेको छ । उनी राजनीतिमा किन लागे ? अरुलाई प्रश्न गर्दा उत्तर नआएकाले उनले उत्तर दिन राजनीति सुरु गरेका हुन् ? के छ अबको उनको भावी योजना ? बिबिसी नेपाली सेवाका फणीन्द्र दाहालले उनीसँग मंगलबार दिउँसो अन्तरवार्ता लिएका थिए। फेसबुक मार्फत लाइभ गरिएको वार्ताको सम्पादित अंश ।
माओवादीबाट हामीलाई इमेल आइरहन्थ्यो। उहाँहरु बिबिसीलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्थ्यो (हाँसो)। भूमिगतकालमा पहिलो अन्तरवार्ता चाहिँ दीनानाथ शर्माको गरियो। पछि मैले नै प्रचण्डको गर्नका लागि अनुरोध गरेँ। उताबाट समय मिलेपछि गर्न पाएँ।